कस्तो होला दुर्गेशको नयाँ गीत ‘बहिष्कार’? भन्छन्, ‘सुन्नै नसकिने छाडा गीतलाई स्वतन्त्र छोडेर मलाई अंकुश’ - Hamro Najar
कस्तो होला दुर्गेशको नयाँ गीत ‘बहिष्कार’? भन्छन्, ‘सुन्नै नसकिने छाडा गीतलाई स्वतन्त्र छोडेर मलाई अंकुश’
प्रकाशित मिति: २०७८ श्रावण २०, बुधबार (५ महिना अघि)
काठमाडौँ । गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाले नयाँ गीत ल्याउँने घोषणा गरेका छन्। फेसबुक पेजमा ‘बहिष्कार’ लेखिएको पोस्टर सार्वजनिक गर्दै उनले आफूलाई राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले बहिष्कार गर्ने निर्णयप्रति प्रतिक्रिया पनि जनाएका छन्।
काठमाडाैँ– गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाले नयाँ गीत ल्याउँने घोषणा गरेका छन्। फेसबुक पेजमा ‘बहिष्कार’ लेखिएको पोस्टर सार्वजनिक गर्दै उनले आफूलाई राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले बहिष्कार गर्ने निर्णयप्रति प्रतिक्रिया पनि जनाएका छन्।
#Durgesh thapa new song